I-Huawei Watch, i-smartwatch esivelele cishe kuzo zonke izici | Izindaba zamagajethi
AmaVillamandos | | Izibuyekezo, SmartWatch
Sekudlule isikhathi esingaphezu konyaka selokhu uHuawei ethule iwashi lakhe lokuqala elibukhali kwi-Mobile World Congress, okuyinto, njengoba sonke sazi, wayibhapathiza ngegama le- Ukubuka kwe-Huawei. Selokhu yethulwe ngokusemthethweni, kudingeke ukuthi kudlule izinyanga eziningi ukuze ifike ngokusemthethweni emakethe, kodwa lokho kwenzekile ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi ekugcineni iwele ezandleni zethu ukuze sikwazi ukuyivivinya, ukuyikhama kanye nokuyihlaziya nonke.
Kulokhu kubuka kweHuawei kufanele sigqamise ngaphambi kokungena kulokho ukuhlaziywa uqobo lokho kuzokwenza wonke umuntu oyifaka esihlakaleni sakhe othandweni, futhi bazophuma othandweni, okungenani kancane, ngokushesha nje lapho beqala ukuyisebenzisa futhi siqaphele ukulinganiselwa kwayo nokuzimela okuncane okusinikeza khona. Vele, esihlakaleni sethu kuzodonsa ukunaka kwanoma ngubani futhi kusinikeze izinsiza ezithokozisayo.
Uma ucabanga ukuthi isikhathi sesifikile sokuqala ukuhlaziywa kwethu kwale smartwatch nokubuyekeza izici zayo eziyinhloko nokucaciswa.
1 Idizayini, iphuzu eliqinile lale Washi yeHuawei
4 Ibhethri, isici esilindile salokhu kubuka kwe-Huawei
8 Izinzuzo nokuqeda
Idizayini, iphuzu eliqinile lale Washi yeHuawei
Kusukela iHuawei Watch yethulwe ngokusemthethweni eMWC 2015 sonke noma cishe sonke siye saqokomisa ngazwi linye ukuklanywa kwaso njengenye yamandla aso. Futhi ngukuthi ngomklamo oyindilinga, ibhande elikhumbuza iwashi lendabuko nezinto zokwakha ezisetshenziselwa ukwakhiwa ezifanele ukukwazi ukwakhiwa ekwakhiweni kwanoma yiliphi iwashi eliphezulu, zinikeza umuzwa kokubili iso nokuthinta kakhulu Kulungile.
Icala lalo lenziwe ngensimbi nge-sapphire crystal sphere. Ngalezi zinto ezimbili singabona ikhwalithi yale divayisi, ngaphezulu kakhulu kokuningi esingakuthola emakethe. Vele, ukwakheka kwayo nezinto ezisetshenzisiwe kuhlobene kakhulu nentengo ye-smartwatch.
Ngokuqondene nebhande, uHuawei akafunanga ukunikela ngentambo yenjoloba noma into esezingeni eliphakeme kakhulu njengabanye abenzi abaningi, futhi isinikeza umucu omuhle ngokwedlulele owenziwe ngezinto ezingaphezu kokulungile. Futhi, uma ungagculiseki ngentambo efakwe njengokujwayelekile nedivayisi, singahlala siyithenga kunoma yisiphi isitolo sobucwebe ngoba iyahambisana cishe nanoma yiluphi uhlobo lwentambo.
Ekugcineni, ukuvala isigaba sokwakhiwa, sifuna ukukunikeza ubukhulu bale Washi yeHuawei, ngoba imvamisa iyisiqeshana solwazi abantu abaningi abadinga ukucabanga ukuthi singangena kanjani esihlakaleni. Ngokuqondene nomkhakha, unobubanzi obungamamilimitha angama-42 nobukhulu bedivayisi ngamamilimitha ayi-11,3. Kubekwe esihlakaleni, okungenani kimi, kuphelele yize kunesihlakala esincane kakhulu.
Ngokulandelayo sizokwenza ukubuyekeza okwengeziwe kwezobuchwepheshe kwezici zewashi le-Huawei. Ngaphakathi sizothola iprosesa ye-APQ8026, enezinhlamvu ezine ze-1,2 GHz ezisekelwa yi-RAM engu-512 MB engaphezulu kokuyisebenzisa ngaphandle kokwesaba futhi isinikeze ukusebenza okuhle.
Ngokuqondene nesikrini sewashi sithola ifayela le- Iphaneli engu-1,4-intshi 286 dpi AMOLED. Lesi sikrini sincane kancane kunaleso samanye amadivayisi alolu hlobo, yize iqiniso ukuthi isipiliyoni besingaphezu kokuhle futhi asibonanga lesi sikrini nganoma yisiphi isikhathi, into encane kunalokho esingakubiza njengokujwayelekile.
Futhi kulokhu kubuka kweHuawei sithola ukugcinwa kwangaphakathi kwe-4 GB, ukuxhumana kwe-Bluetooth 4.1 ne-WiFI 802.11 b / g / n. Njengamanye ama-smartwatches, ifaka i-accelerometer, isidlidlizi ne 350 mAh ibhethri okuthe, njengoba sishilo phambilini, kuyindlala ngandlela thile ukukwazi ukusebenzisa insimbi isikhathi esingaphezu kosuku.
Amawashi ama-Smart athathe ukuqaqa okubaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokusebenza futhi le-Huawei Watch nayo iyahlukile. Ngenxa yenqubo yayo nememori ye-RAM nokwenza okuhle kwe-Android Wear kuvumela zonke izinhlelo zokusebenza ziphendula ngokukhethekile futhi ngaphandle kokusinika noma iyiphi inkinga noma inselelo lapho uzivula.
Ukusebenza okujwayelekile esingakusho kuvelele, yize siphenya kancane ngokujula sithole ukubambezeleka okuthile lapho kuvulwa izilungiselelo, ngokwesibonelo, yize kungeyona into ebaluleke kakhulu noma into abasebenzisi abaningi abazoyikhathalela. Ngaphandle kokuthi unake kakhulu, njengoba senza ngawo wonke amadivayisi, ungahle ungaboni lokhu kubambezeleka.
Ibhethri, isici esilindile salokhu kubuka kwe-Huawei
Ibhethri lale Huawei Watch ngokungangabazeki lingenye yamaphuzu amabi kakhulu futhi lapho iHuawei kuzofanele isebenze ngokuzayo. Iningi lamadivayisi walolu hlobo lisinikeza ukuzimela okuncishisiwe futhi lokho ngeke kusivumele ukuthi sisebenzise i-smartwatch amahora angama-24. Endabeni yale smartwatch evela kumkhiqizi waseChina, sithola ibhethri elingu-350 mAh elingaphezu kokwanele ukufinyelela ekupheleni kosuku, kodwa lokho kuzosiphoqa ukuthi silikhokhise njalo ebusuku ukuze likwazi ukulisebenzisa ngaphandle kwenkinga ngokulandelayo usuku.
Ekuvivinyweni okwehlukile esikwenzile, sikwazile ngaphandle kwenkinga ukuthi i-Huawei Watch imelane nokusebenza usuku lonke, ngaphandle kwezikhathi ezimbalwa lapho sivuke ekuseni kakhulu sazama ukunweba ukuzimela kwaze kwaba sekuseni. Ukuphela kwendlela yokwenza ibhethri lale smartwatch lihlale ngaphezu kwamahora angama-24 kwakuwukuyibhangqa futhi ulisebenzise njengewashi lendabuko.
Ibhethri lale Washi yeHuawei ithuthukile uma iqhathaniswa namanye amadivayisi alolu hlobo Bebesemakethe isikhathi esithile, kepha ngaphandle kokungabaza kusamele kuthuthukise okuningi ukusinikeza ukusetshenziswa okuthakazelisa ngokwengeziwe.
Kulesi sigaba, kufanele sigqamise ishaja yedivayisi eyiyo ethokomele kunazo zonke esizazi emakethe ye-smartwatch. Njengoba ukwazi ukubona esithombeni ukuthi sikukhombisa ishaja, vele ubeke i-Huawei Watch kusisekelo sokushaja bese iqala ukukhokhisa. Esikhathini esifushane nje sizoba nebhethri elanele isikhathi esihle futhi ngaphandle kokulinda isikhathi eside sizoba nebhethri usuku lonke.
Okwamanje this Ukubuka kwe-Huawei Singayithola ezitolo eziningi, ezomzimba nezedijithali. Intengo ingahluka kakhulu kuye ngokuthi siyithenga kuphi. Isibonelo namhlanje Singayithenga ku-Amazon ngentengo engama-euro angama-299, okuyintengo ehlaba umxhwele, nokuningi uma sibheka ukuthi inani elisemthethweni lale smartwatch ngama-euro angama-360.
Lokhu kubuka kweHuawei kungatholakala kokumnyama, igolide noma isiliva. Lesi sakamuva siyimodeli esikwazile ukuyivivinya ku-Actualidad Gadget, yize sikwazile ukubona bonke abanye amamodeli eduze futhi ngokombono wethu ngokungangabazeki yinhle kakhulu. IHuawei nayo inezintambo eziningana ezisemthethweni ezithengiswayo, yize njengoba sesishilo, inqwaba yamabhande iyahambisana nale divayisi.
Cishe cishe inyanga ngiyigqokile le Washi yeHuawei esihlakaleni sami futhi naphezu kweqiniso lokuthi ukwakheka kwayo kungenza ngithandane njengawo wonke umuntu futhi kube wusizo olukhulu kaningi, ngicabanga lezi zinhlobo zamadivayisi zisesisekelweni esibiza kakhulu yokusetshenziswa esingakuthola.
Futhi okwamanje ama-smartwatches asinikeza izinketho ezimbalwa kakhulu kubasebenzisi, ngentengo abanayo, futhi kimi konke kunzima kakhulu ukusebenzisa le Huawei Watch enedivayisi enohlelo lokusebenza lwe-iOS. Ngikushilo kaningi kubangani nomndeni, nakwabambalwa nakule webhusayithi, kepha kuze kube yilapho amawashi ahlakaniphile engasiniki ukuzimela okukhulu, okungenani izinsuku ezi-3 noma ezi-4, ngezinketho eziningi abasinikeza zona noma ukujabulisa kwazo design ngeke iqede ukunginqoba futhi ibonakale ilusizo. Sengivele ngikhokhisa ifoni yami nsuku zonke futhi ngobuqotho angizimisele ukuthi itafula lami ligcwale izinto ubusuku ngabunye ngomele amandla.
Ngishiya umbono wami eceleni, Lokhu kubuka kweHuawei akungabazeki ukuthi yi-smartwatch engcono engizame ukuphola nayo. Ubani othanda futhi oqinisekayo ngezinketho nokuzimela okunikezwa yilezi zinsiza, ngaphandle kokungabaza ukusebenzisa ama-euro ambalwa kule divayisi kusuka kumkhiqizi waseChina kuyisinqumo esihlakaniphile. Uma, njengoba ngingaqiniseki ngemisebenzi, noma ukuzimela kanye namawashi wendabuko, ungayithengi le-Huawei Watch noma enye i-smartwatch ngoba kuzoba nzima ukukukholisa, yize ungazi.
Idizayini nezinto ezisetshenziselwa ukukhiqiza
Ucabangani ngalokhu kubuka kweHuawei?. Sitshele umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi lapho sikhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Huawei Watch, i-smartwatch esivelele cishe kuzo zonke izici
Izizathu ezi-7 zokuthi kungani kungafanele uthenge i-Samsung Galaxy S7